ရွှေအိုရောင် အသားအရေပိုင်ရှင်တို့နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး အသားရောင် နှုတ်ခမ်းနီ (၆) မျိုး -
Posted on February 4, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
ဆိုးလိုက်တုန်းကတော့ လှမယ်ထင်လို့လေ… ထွက်လာတော့မှ ဖြူဖပ်ဖြူလျော်ကြီးတဲ့လား -_-
အသားရောင် နှုတ်ခမ်းနီက ၃ နှစ်လောက်အတွင်း ဈေးကွက်ထဲမှာ တောင်းဆိုမှုအများဆုံး ဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ကွယ်… ဒါပေမဲ့ ယောင်းတို့ သိကြတဲ့အတိုင်း ဒီအရောင်ကို စထွင်လိုက်တာ အနောက်နိုင်ငံကဆိုတော့ ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ သွင်းတဲ့အရောင်တွေက ပန်းရောင်အောက်ခံအရောင်တွေဖြစ်ရင်ဖြစ်၊ မဖြစ်ရင် အသားအရေနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်က တစ်ထပ်တည်းကျပြီး ဖြူဖပ်ဖြူလျော် ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေ တွေ့ရတော့ အဆင်မပြေဘူးလေနော့်။ အဲဒါကြောင့် ရွှေမြန်မာတို့ရဲ့ အသားအရေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်မယ့် အသားရောင် နှုတ်ခမ်းနီလေးတွေကို ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ အဲ့တော့ ထုံးစံအတိုင်း အတူတူ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…
နှုတ်ခမ်းနီအရောင်အကြောင်း မပြောခင်မှာ ရွှေအိုရောင်အသားအရေဆိုတာကို အရင်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ချင်ပါတယ်။ ရွှေအိုရောင်အသားအရေဆိုတာ အဝါရောင်သန်းနေတဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်ကိုပြောတာပါ။ (ဖြူသည်ဖြစ်စေ၊ ညိုသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ရဲ့ base undertone အဝါရောင်ဆိုရင် ရွှေအိုရောင် အသားအရေပိုင်ရှင်ပါပဲ။) ဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်တွေဆီ ဆက်သွားကြမယ်နော်…
(၁) Honey Nude (ပျားရည်အသားရောင်)
ယောင်းတို့ ပျားရည်အရောင်ကို ရင်းရင်းနှီးနှီးမြင်ဖူးတယ်မလား? ဒီနှုတ်ခမ်းနီအရောင်ကတော့ လိမ္မော်နည်းနည်းဖောက်တဲ့ အသားအရောင်ပေါ့နော်။ ဒီအရောင်ကတော့ အသားလတ်သူ (မဖြူမညို ပုံမှန်အသားအရောင်) နဲ့ အသားနည်းနည်းလေးညိုတဲ့ ယောင်းတွေနဲ့ အရမ်းလိုက်ဖက်တဲ့အရောင်လေးပါ။
(၂) Plum Nude (ဆီးသီးအသားရောင်)
Plum အရောင်က အသားရောင်တိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်ဆိုပေမဲ့ အသားညိုတဲ့ယောင်းတွေ ဆိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ ပိုပြီးစူးရှတဲ့ အသွင်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ.. Plum nude ကလည်း ရွှေအိုရောင်ကိုမှ အသားညိုတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ ယောင်းတွေအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ အရောင်လေးပါပဲ။ (Plum အရောင်ကကျတော့ နေ့ဘက် ထသွားထလာ ဆိုးဖို့အတွက်ဆို မသင့်တော်ဘူးလေ။)
(၃) Hepburn Honey Nude (မက်မွန်သီးကိုမှ အညိုဘက်ပိုသမ်းတဲ့ အသားရောင်)
မက်မွန်သီးရောင်က အဝါဖောက်တဲ့ အသားရောင်အတွက် တကယ့်ကို အကောင်းဆုံး အရောင်ပါ။ အဲဒီမက်မွန်ကိုမှ အညိုလေး ထပ်ဖောက်ထားတော့ အသားဖြူတဲ့ ယောင်းတွေအတွက် အရမ်းဖြူဖျော့ဖျော့ကြီး မဖြစ်နေတော့ဘဲ ရှက်သွေးလေးသမ်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံ ဖန်ဆင်းပေးနိုင်ပြီပေါ့။
Hepburn Honey Nude
(၄) Deep Rose Nude (နှင်းဆီရင့်ရင့် အသားရောင်)
နှင်းဆီရင့်ဆိုတော့ မျက်လုံးထဲမယ် ဘယ်အရောင် ပြေးမြင်ရမှန်းမသိ ဖြစ်တယ်မလား? ခရမ်းရောင်အပုပ်ကိုမှ အသားရောင်ရောထားလို့ နှင်းဆီရင့်ရောင်လို့ခေါ်တာပါ။ ခရမ်းဆိုတော့ ရွှေအိုရောင်နဲ့ လိုက်ပါ့မလားဆိုပြီး မေးတော့မယ်မလား? သူ့ခရမ်းက ပန်းရောင်သမ်းတဲ့ ခရမ်းမဟုတ်ဘဲ အပုပ်ရောင်ဖြစ်တဲ့အပြင် ဒီအရောင်ကို အညိုနည်းနည်းရင့်တာနဲ့ ပေါင်းလိုက်တော့ အသားညိုတဲ့ယောင်းတွေ ပွဲတက်တဲ့အခါ ထက်မြက်ပြီးပြတ်သားတဲ့ အသွင်ကို ဆောင်ယူပေးပါလိမ့်မယ်။ (အသားဖြူတဲ့ ယောင်းတွေကတော့ မျက်နှာက ခပ်ပုပ်ပုပ်လိုမျိုး ဖြစ်သွားတတ်တာမို့ ဖြစ်နိုင်ရင် မရွေးစေချင်။)
Deep rose nude
Related Article >>> လိုက်ဖက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်လေး ရွေးကြမယ်
(၅) Tribeca Tan Nude (လိမ္မော်သမ်းတဲ့ အသားရောင်)
လိမ္မော်သမ်းတယ်ဆိုမှတော့ ဒီရွှေအိုရောင်အသားနဲ့ မလိုက်ဘဲ ဘယ်နေမလဲနော်… သူ့ရဲ့အရောင်က လိမ္မော်အရမ်းတောက်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ coral လို့ခေါ်တဲ့ သန္တာကျောက်တန်းအရောင်နဲ့ သွားတူတာမို့ ကြေးနီရောင် အသားရေပိုင်ရှင်တွေနဲ့ အင်မတန်ကို သင့်တော်တဲ့ အရောင်မျိုးပါ။ အသားဖြူတဲ့လူရော၊ ညိုတဲ့လူရော အိတ်ထဲဆောင်ထားသင့်တဲ့ အရောင်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
(၆) Chocolate Brown Shade (ချောကလက်အသားရောင်)
ပုံမှန်အသားအရေ (Neutral skin tone) တွေအတွက် ဒီလို ချောကလက်ရောင်လေးက မဖြူမဖျော့ဘဲ သဘာဝဆန်ဆန် ဖြစ်နေစေမှာပါ။ (အသားဖြူသူတွေအတွက်ကတော့ အရမ်းညိုပြီး အသားညိုတဲ့ ယောင်းတွေအတွက်ကတော့ နည်းနည်းပုပ်သွားမယ်လို့ ထင်တယ်။) ချောကလက်အရောင်ဆိုပေမဲ့ အညိုဆင်ကြီးမဟုတ်ဘဲ ခပ်ဝါဝါဘက်လေး နည်းနည်းဖောက်သွားတာပါ။ (အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာပြောရရင် ကွီးစိုင်းရဲ့ My Bae အရောင်လိုမျိုးပေါ့ယောင်းရယ်။)
မိတ်ကပ်ကို ခပ်ပါးပါးနဲ့ သဘာဝဆန်ဆန်လေး လိမ်းချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် ဒီလိုအသားရောင် နှုတ်ခမ်းနီလေးတွေက မဆောင်မဖြစ်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်နော်။ အသားရောင်လို့ လွယ်လွယ်ဆိုကြပေမဲ့ သူ့မှာလည်း အောက်ခံအရောင်ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးကွဲသေးတာမို့ သေချာရွေးနိုင်မှ တော်ကာကျမယ်နော်…
References : independent, Teen Vogue
ဆိုးလိုကျတုနျးကတော့ လှမယျထငျလို့လေ… ထှကျလာတော့မှ ဖွူဖပျဖွူလြျောကွီးတဲ့လား -_-
အသားရောငျ နှုတျခမျးနီက ၃ နှဈလောကျအတှငျး ဈေးကှကျထဲမှာ တောငျးဆိုမှုအမြားဆုံး ဖွဈလာပါတယျတဲ့ကှယျ… ဒါပမေဲ့ ယောငျးတို့ သိကွတဲ့အတိုငျး ဒီအရောငျကို စထှငျလိုကျတာ အနောကျနိုငျငံကဆိုတော့ ဒီမွနျမာနိုငျငံမှာ သှငျးတဲ့အရောငျတှကေ ပနျးရောငျအောကျခံအရောငျတှဖွေဈရငျဖွဈ၊ မဖွဈရငျ အသားအရနေဲ့ နှုတျခမျးနီအရောငျက တဈထပျတညျးကပြွီး ဖွူဖပျဖွူလြျော ဖွဈရငျဖွဈနတောမြိုးတှေ တှရေ့တော့ အဆငျမပွဘေူးလနေေျာ့။ အဲဒါကွောငျ့ ရှမွေနျမာတို့ရဲ့ အသားအရနေဲ့ အလိုကျဖကျဆုံးဖွဈမယျ့ အသားရောငျ နှုတျခမျးနီလေးတှကေို ဒီဆောငျးပါးထဲမှာ ဖျောပွပေးသှားမှာပါ။ အဲ့တော့ ထုံးစံအတိုငျး အတူတူ ကွညျ့လိုကျကွရအောငျ…
နှုတျခမျးနီအရောငျအကွောငျး မပွောခငျမှာ ရှအေိုရောငျအသားအရဆေိုတာကို အရငျဆုံးအဓိပ်ပာယျဖှငျ့ခငျြပါတယျ။ ရှအေိုရောငျအသားအရဆေိုတာ အဝါရောငျသနျးနတေဲ့ အသားအရပေိုငျရှငျကိုပွောတာပါ။ (ဖွူသညျဖွဈစေ၊ ညိုသညျဖွဈစေ ကိုယျ့ရဲ့ base undertone အဝါရောငျဆိုရငျ ရှအေိုရောငျ အသားအရပေိုငျရှငျပါပဲ။) ဆိုတော့ နှုတျခမျးနီအရောငျတှဆေီ ဆကျသှားကွမယျနျော…
(၁) Honey Nude (ပြားရညျအသားရောငျ)
ယောငျးတို့ ပြားရညျအရောငျကို ရငျးရငျးနှီးနှီးမွငျဖူးတယျမလား? ဒီနှုတျခမျးနီအရောငျကတော့ လိမ်မျောနညျးနညျးဖောကျတဲ့ အသားအရောငျပေါ့နျော။ ဒီအရောငျကတော့ အသားလတျသူ (မဖွူမညို ပုံမှနျအသားအရောငျ) နဲ့ အသားနညျးနညျးလေးညိုတဲ့ ယောငျးတှနေဲ့ အရမျးလိုကျဖကျတဲ့အရောငျလေးပါ။
(၂) Plum Nude (ဆီးသီးအသားရောငျ)
Plum အရောငျက အသားရောငျတိုငျးနဲ့ လိုကျဖကျတယျဆိုပမေဲ့ အသားညိုတဲ့ယောငျးတှေ ဆိုးလိုကျတဲ့အခါမှာ ပိုပွီးစူးရှတဲ့ အသှငျကိုဖွဈစပေါတယျ။ ဒီလိုပါပဲ.. Plum nude ကလညျး ရှအေိုရောငျကိုမှ အသားညိုတဲ့ဘကျကိုသှားတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျ အထူးသငျ့တျောတဲ့ အရောငျလေးပါပဲ။ (Plum အရောငျကကတြော့ နဘေ့ကျ ထသှားထလာ ဆိုးဖို့အတှကျဆို မသငျ့တျောဘူးလေ။)
(၃) Hepburn Honey Nude (မကျမှနျသီးကိုမှ အညိုဘကျပိုသမျးတဲ့ အသားရောငျ)
မကျမှနျသီးရောငျက အဝါဖောကျတဲ့ အသားရောငျအတှကျ တကယျ့ကို အကောငျးဆုံး အရောငျပါ။ အဲဒီမကျမှနျကိုမှ အညိုလေး ထပျဖောကျထားတော့ အသားဖွူတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျ အရမျးဖွူဖြော့ဖြော့ကွီး မဖွဈနတေော့ဘဲ ရှကျသှေးလေးသမျးနတေဲ့ နှုတျခမျးတဈစုံ ဖနျဆငျးပေးနိုငျပွီပေါ့။
(၄) Deep Rose Nude (နှငျးဆီရငျ့ရငျ့ အသားရောငျ)
နှငျးဆီရငျ့ဆိုတော့ မကျြလုံးထဲမယျ ဘယျအရောငျ ပွေးမွငျရမှနျးမသိ ဖွဈတယျမလား? ခရမျးရောငျအပုပျကိုမှ အသားရောငျရောထားလို့ နှငျးဆီရငျ့ရောငျလို့ချေါတာပါ။ ခရမျးဆိုတော့ ရှအေိုရောငျနဲ့ လိုကျပါ့မလားဆိုပွီး မေးတော့မယျမလား? သူ့ခရမျးက ပနျးရောငျသမျးတဲ့ ခရမျးမဟုတျဘဲ အပုပျရောငျဖွဈတဲ့အပွငျ ဒီအရောငျကို အညိုနညျးနညျးရငျ့တာနဲ့ ပေါငျးလိုကျတော့ အသားညိုတဲ့ယောငျးတှေ ပှဲတကျတဲ့အခါ ထကျမွကျပွီးပွတျသားတဲ့ အသှငျကို ဆောငျယူပေးပါလိမျ့မယျ။ (အသားဖွူတဲ့ ယောငျးတှကေတော့ မကျြနှာက ခပျပုပျပုပျလိုမြိုး ဖွဈသှားတတျတာမို့ ဖွဈနိုငျရငျ မရှေးစခေငျြ။)
Related Article >>> လိုကျဖကျတဲ့ နှုတျခမျးနီအရောငျလေး ရှေးကွမယျ
(၅) Tribeca Tan Nude (လိမ်မျောသမျးတဲ့ အသားရောငျ)
လိမ်မျောသမျးတယျဆိုမှတော့ ဒီရှအေိုရောငျအသားနဲ့ မလိုကျဘဲ ဘယျနမေလဲနျော… သူ့ရဲ့အရောငျက လိမ်မျောအရမျးတောကျတာမြိုး မဟုတျဘဲ coral လို့ချေါတဲ့ သန်တာကြောကျတနျးအရောငျနဲ့ သှားတူတာမို့ ကွေးနီရောငျ အသားရပေိုငျရှငျတှနေဲ့ အငျမတနျကို သငျ့တျောတဲ့ အရောငျမြိုးပါ။ အသားဖွူတဲ့လူရော၊ ညိုတဲ့လူရော အိတျထဲဆောငျထားသငျ့တဲ့ အရောငျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။
(၆) Chocolate Brown Shade (ခြောကလကျအသားရောငျ)
ပုံမှနျအသားအရေ (Neutral skin tone) တှအေတှကျ ဒီလို ခြောကလကျရောငျလေးက မဖွူမဖြော့ဘဲ သဘာဝဆနျဆနျ ဖွဈနစေမှောပါ။ (အသားဖွူသူတှအေတှကျကတော့ အရမျးညိုပွီး အသားညိုတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျကတော့ နညျးနညျးပုပျသှားမယျလို့ ထငျတယျ။) ခြောကလကျအရောငျဆိုပမေဲ့ အညိုဆငျကွီးမဟုတျဘဲ ခပျဝါဝါဘကျလေး နညျးနညျးဖောကျသှားတာပါ။ (အနီးစပျဆုံး ဥပမာပွောရရငျ ကှီးစိုငျးရဲ့ My Bae အရောငျလိုမြိုးပေါ့ယောငျးရယျ။)
မိတျကပျကို ခပျပါးပါးနဲ့ သဘာဝဆနျဆနျလေး လိမျးခငျြတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ ဒီလိုအသားရောငျ နှုတျခမျးနီလေးတှကေ မဆောငျမဖွဈဆောငျထားသငျ့ပါတယျနျော။ အသားရောငျလို့ လှယျလှယျဆိုကွပမေဲ့ သူ့မှာလညျး အောကျခံအရောငျပျေါမူတညျပွီး အမြိုးမြိုးကှဲသေးတာမို့ သခြောရှေးနိုငျမှ တျောကာကမြယျနျော…
Tagged asian, golden, lipstick, nude, shades, skin, tone
ပျော့ပျောင်းတဲ့ ဖော့ဖယောင်း လက်ဖဝါးလေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့
Posted on November 9, 2017 Author Myat Moe
သူများလက်လေးတွေ သွားကိုင်တိုင်းနူးညံ့နေတာပဲဆိုပြီး အားကျစရာမလိုတော့အောင်…
ခြင်ကိုက်ဖုအတွက် သဘာဝ ငှက်ပျောခွံကုထုံး
Posted on December 28, 2016 Author Christina Rosy
ငှက်ပျောသီးအခွံနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ခြင်ကိုက်ဖုတွေကို ကုသနိုင်မယ်ဆိုရင် အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိကြမှာပါ။ ခြင်ကိုက်ဖုတွေကြောင့် ယားယံပြီး နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်ရုံသာမကပဲ ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေ အဖုဗရပွနဲ့ အပြင်သွားရလာရ စိတ်ရှုပ်လွန်းလှပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အဲ့ဒီ့ ခြင်ကိုက်ဖုလေးကို နှိမ်နင်းနိုင်မယ့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူလှတဲ့ သဘာဝကုထုံးလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ငှက်ပျောခွံနှင့် ရေခဲတုံး အထူးသဖြင့် ခြင်ကျားလိုမျိုး ခြင်အကောင်ကြီးတွေကိုက်တဲ့အခါ ယားယံရုံမက စပ်ပျဉ်းပျဉ်း ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အခါမှာ ရုပ်ဆိုးလှတဲ့ အနီရောင်အဖုကြီးတွေထလာတတ်ပါတယ်။ ရေခဲတုံးနဲ့ ငှက်ပျော်ခွံကုထုံးဟာ ဆိုးရွားလှတဲ့ ခြင်ကိုက်ဖုတွေပါ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်း ၁။ ငှက်ပျော်ခွံရဲ့ အဖြူအသားကို ဇွန်းနဲ့ခြစ်ထုတ်ပါ။ ၂။ရေအနည်းငယ်ရောပြီး ခပ်ပြစ်ပြစ်ဖြစ်အောင်မွှေပါ။ ၃။ ခြင်ကိုက်ဖုပေါ်လိမ်းပေးပါ။ ၄။အဝတ်သန့်တစ်ခုထဲ ရေခဲတုံးထည့်ပြီး ငှက်ပျော်ခွံအနှစ်လိမ်းထားတဲ့ အနာနေရာပေါ် မိနစ်၃၀ ခန့် အုံပေးပါ။ ၅။ရေနှင့်ဆေးချပါ။ ၂။ငှက်ပျောခွံနှင့် […]
တစ်နေကုန်လုံး အဆီမပြန်ဘဲ မျက်နှာလေးက သိပ်သိပ်ဝင်းဝင်းလေး ဖြစ်နေစေဖို့
Posted on October 16, 2017 Author Nandar
ကိုယ်​တိုင်​သုံးကြည့်ပြီး အဆင်​​ပြေမယ်​ထင်​တဲ့နည်းလမ်း​လေး​တွေပဲ ​ရွေးပြီး​တော့ ​ဖော်​ပြလိုက်​ပါတယ်​ ​ယောင်းတို့​ရေ။
မကြာသေးခင်ကမှ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Paris Haute Couture week 2019 အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်း